१ घन्टामै लाखौ कमाउने यी महिलाको काम बारे थाहा पाउदा उड्छ होस् —
१ घन्टामै लाखौ कमाउने यी महिलाको काम बारे थाहा पाउदा उड्छ होस्
एजेन्सी : मानिसहरुले पैसाको लागि के सम्म गरेका हुदैनन् तर पनि उनीहरुले भनेजस्तो कमाई गर्न सकेका हुदैनन !आफ्नो घर गाउ देश छोडेर अन्य देशहरुमा पुग्छन युवाहरु तर त्यहा पुगेर पनि उनीहरुले दुख मात्र पाएका हुन्छन ! मानिसहरुले दिन रात खुन पसिना गरेर पनि कमाउन नसक्ने पैसा एक युवतीले एकै घन्टामा लाखौ कमाउछिन !
अष्ट्रेलियन एक चेल्सिया नाम गरेकी युवतीले घर बसिबसी करोडौं कमाइरहेकी छन् । उनको नोकरी थाहा पाउँदा मानिसहरु अचम्मित हुन्छन् । उनको नोकरी निकै आरामदायी छ, मात्र उनले केही घन्टामा निकै पैसा पाउँछिन् ।
चेल्सियालाई प्रत्यक्ष हेर्नका लागि लाखौं मानिसहरु आउँछन् । उक्त स्ट्रिमिङको सब्स्क्रिप्शन, विज्ञापन र स्पोन्सरशिपबाट उनले पैसा पाउँछिन् । चेल्सियाका काम हो मात्र बस्नु हो र भिडियो गेम खेल्नु हो जसबाट उनले मोटो रकम प्राप्त गर्छिन् । उनले फार्मेसीमा विश्वविद्यालयबाट डिग्री गरेकी छन् । तर उनका अनुसार लाइभ स्ट्रिमिङबाट उनले जति कमाउँछिन्, त्यति उनले पढाईको बलले कमाउन सक्दिनन् । त्यसैले गर्दा मनिषसँग अध्ययन हुन निकैनै जरुरि रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ! अस्ट्रेलियामा गत १ बर्षमा २२ पुरुषहरुले ब’च्चा जन्मा’ए…..
एजेन्सी । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ महिला हरु त गर्भवती भएको सुनिन्छ देखिन्छ तर पुरुष ले बच्चा जन्माए भन्दा सबैलाई अचम्म नलाग्ने त कुरै भएन महिला ले बच्चा जन्माउनु त कुनै नौलो कुरा नै भएन तर अस्ट्रेलियामा भने गत एक वर्ष मा २२ जना पुरुष हरु सुत्केरी भएका छन् ! अष्ट्रेलिया’को डिपार्ट’मेन्ट अफ ह्युमन सर्भिस’ले जारी गरेको तथ्यां’क अनुसार गत वर्ष २२ जना पुरुष गर्भ’वती बने र बच्चा’समेत जन्माए ।
अष्ट्रेलियामा त्यसरी बच्चा जन्माउने पुरुषहरु समलिंगी पुरुष रहेको पनि बताइएको छ ।तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा यसरी बच्चा जन्माउने ट्रान्सजेन्डर अष्ट्रेलियाली पुरुषको संख्या २ सय २८ रहेको छ । अष्ट्रेलियामा पहिलोपटक सन् २००९ मा पुरुषले बच्चाको जन्म दिएको घटना सार्वज्निक भएको थियो ।
त्यस समय पुरुषले बच्चा जन्माउने विषयलाई लिएर कतिपय मानिसहरु अष्ट्रेलियामा विरोधमा समेत उत्रिएका थिए । जसका कारण बच्चा जन्माउने पुरुषको नाम गोप्य राखिएको थियो ।तर अहिले समय बदलिएको छ । मेलबर्न विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक समलिंगी पुरुषको बच्चा जन्माउने हकको पैरवी गर्दै आएका छन् ।उनका अनुसार अब लैंगिकताको विषयमा समाजले आफ्नो सोच बदल्ने बेला आएको छ । उनी भन्छन्, जो पुरुष आफ्नो जीवनमा यस्तो फैसला लिन्छन् उनीहलाई बच्चा जन्माउनमा कुनै समस्या छैन ।
यसरी हुन्छन् मृर्गौला फेल । कारण र लक्षणहरू यस्ता छन् । जानिराख्नुहोस्
पूर्व अधिराजकुमारी पूर्णिका शाहले ए’सिड आक्र’मण पी’डित मुस्कानको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यसो लेखिन्